10 Brand Monitoring Zvishandiso Iwe Zvaunogona Kutanga NeMahara | Martech Zone
Kushambadzira inzvimbo yakakura kwazvo yeruzivo zvekuti dzimwe nguva inogona kukurisa. Zvinonzwa sekunge iwe unofanirwa kuita zvisina musoro huwandu hwezvinhu kamwechete: funga kuburikidza neyako nzira yekutengesa, ronga zvirimo, chengeta ziso paSEO uye pasocial media kushambadzira uye nezvimwe zvakawanda.
Neraki, panogara paine martech yekutibatsira. Zvishandiso zvekushambadzira inogona kutora mutoro pamafudzi edu uye kugadzirisa zvikamu zvinonetesa kana zvishoma zvinonakidza zvekushambadzira. Zvakare, dzimwe nguva vanogona kutipa ruzivo rwatisingakwanise kuwana neimwe nzira - sekutarisa kwechiratidzo.
Chii chinonzi Brand Monitoring?
Brand yekutarisa ndiyo nzira yekutevera hurukuro dzakanangana neako mabhurani online: pasocial media, maforamu, ongorora akaunganidzwa, mawebhusaiti, zvichingodaro. Dzimwe nzira dzepamhepo, senge mazhinji mapuratifomu enhau, semuenzaniso, tendera vashandisi kumaka mabrandi kuti vataridze pfungwa dzavo. Asi kunyangwe iwo mamaki ataurwa anogona kupotsa zviri nyore mune yemagariro mheremhere ruzha.
Nenhamba yepamhepo chiteshi chatinacho, hazvibviri kuvanhu kuteedzera zvese nemaoko. Zvishandiso zvekutarisa zveBrand zvinokubatsira kuteedzera zviitiko zvepamhepo zvekambani yako, chengeta mukurumbira wako, shora vakwikwidzi vako uye zvichingodaro.
Nei Uchifanira Brand Brand Kuongorora?
Asi iwe unonyatsoda here kutarisa zviri kutaurwa nevamwe pamusoro pechiratidzo chako pamhepo? Zvirokwazvo unoita!
Kuongorora mhando yako kunokutendera ku:
Nzwisisa zvirinani vateereri vako: unogona kutsvaga kuti ndeapi masocial media mapuratifomu nemawebhusaiti avanoshandisa, mitauro ipi yavanotaura, kwavanogara, nezvimwe.
Ziva izvo simba rako uye kusasimba kwako. Paunenge uchiita brand yekutarisa unogona kuwana zvichemo zvevatengi uye zvikumbiro uye uone maitiro ekuvandudza chigadzirwa chako.
Chengetedza yako muchiso mukurumbira kupokana nedambudziko rePR. Nokukurumidza kutsvaga zvisina kunaka kutaurwa kwechiratidzo chako unogona kubata nazvo ipapo ipapo vasati vaita dambudziko renhau rezvemagariro.
Tsvaga mikana yekushambadzira: tsvaga mapuratifomu matsva, mikana ye backlink, uye nharaunda kushambadzira.
Tsvaga vanokurudzira vanoda kubatana newe.
Uye ndiko kutanga chete. Maturusi ekuongorora maturusi anogona kuita zvese izvi uye nezvimwe - iwe unongoda kusarudza rakakodzera bhizinesi rako.
MaBrand ekuongorora maturusi anosiyana mukugona kwavo, mamwe anowoneka analytics, mamwe anosanganisa kuongorora nekutumira uye kuronga maficha, mamwe anotarisa pane yakasarudzika chikuva. Mune ino runyorwa, ini ndakaunganidza plethora yezvishandiso kune chero zvinangwa uye bhajeti. Ndinovimba muchakwanisa kuwana iyo inokwana.
Ese maratidziro ekuongorora maturusi pane ino runyorwa angave emahara kana kupa yemahara muedzo.
Awario chishandiso chekuteerera munharaunda chinogona kuongorora mazwi ako (kusanganisira zita rako rechiratidzo) munguva chaiyo. Awario sarudzo yakasarudzika kumakambani madiki nepakati uye emashambadziro: inopa analytics ine simba pamutengo unodhura.
Inowana zvese zvinotaurwa zvechigadzirwa chako pasocial media, mune zvinoburitswa midhiya, mablog, maforamu, uye webhu. Pane seti yakasarudzika yemasefa ayo anotendera iwe kuti uite yako yekutarisisa ive chaiyo uye a Boolean yekutsvaga modhi kukubatsira iwe kugadzira chaiyo yakatarwa mibvunzo. Izvi zvinogona kubatsira kana zita rako rezita ririwo zita rakajairika (funga Apple).
NaAwario iwe unowana mukana kune wega wega online zvinotaurwa uye kune iyo analytics yezve zvataurwa. Icho chishandiso chinokupa huwandu hwevanhu uye hunhu pane vanhu vanokurukura nezvechiratidzo chako, zvinokutendera kuti uenzanise zvigadzirwa zvako nevakwikwidzi vako uye zvinopa mushumo wakasiyana weVanokurudzira vanotaura nezvechako.
Iwe unogona kuseta Awario kuti ikutumire iwe zviziviso nemitauro mitsva neemail, Slack, kana kusundidzira notices.
Mitengo: $ 29-299 painobhadharwa pamwedzi. zvirongwa zvegore zvinokuponesa mwedzi miviri.
Muedzo wemahara: Mazuva manomwe eiyo Starter chirongwa.
Social Searcher iri sarudzo hombe kune avo vanonyanya kufarira kushanda nemitauro yega. Iyo iri nyore-kushandisa webhu papuratifomu iyo inokupa iwe nezvakataurwa zveako brand kubva kune akawanda masosi anosanganisira Facebook, Twitter, Reddit, YouTube uye nezvimwe.
Mukana wekutanga weSocial Searcher ndeyekugadzira kwayo - paunoenda kune webhusaiti yepamutemo unobvunzwa nekukurumidza kuisa mazwi ako ekutanga uye kutanga kuongorora. Iwe hautombofaniri kusaina neemail. Wekutsvaga Zvemagariro anotora nguva shoma yekutsvaga uye obva akuratidza chikafu chakazara nezvakataurwa kubva kwakasiyana masosi. Iwe unogona zvakare kudzvanya pane iyo analytics tebhu kuti uone kuputsika kwekutaurwa nemanyuko, nenguva yavakatumirwa, uye nemanzwiro.
Zvekutsvaga Zvemagariro inzira huru kana iwe uchida kukurumidza kutarisa kutaurwa kweshoko repamhepo online. Kana iwe uchida kuve neyakaiswazve brand yekutarisa maitiro, pamwe tarisa mune mamwe maturusi neayo ari nyore UI.
Mitengo: yemahara, asi iwe unogona kubhadhara chirongwa (kubva ku € 3., 49 kusvika ku € 19.49 pamwedzi) yekumisikidza yambiro dzeemail uye kuongorora kusingachinjiki.
Muedzo wemahara: chishandiso chiri mahara.
Mentallyiki chishandiso chezvemagariro manejimendi chinopa chiratidzo chekuongorora pamwe nekushambadzira mashandiro. Uye inokwanisa kwazvo kuita zvese izvi zvinhu.
Iyo inobvumira kusvetukira mukutaurirana kwainowana munguva chaiyo uye kudyidzana nevashandisi venhau venhau. Iyo inokwanisa kuteedzera yako mhando zvese pasocial media uye web uye mune inodarika makumi maviri mitauro.
Chii chinoita kuti Mentallytics ibude iSocial Intelligent Advisor. Iyo yeAI sevhisi iyo inowana inoitika inoitika kubva kune yemagariro data. Semuenzaniso, kana iwe uri kuongorora yako brand, zvinokwanisa otomatiki kuwana makuru ekurwadziwa mapoinzi evatengi vako uye woasimbisa iwo kwauri.
Pamusoro peizvozvo, Mentallytics inopa analytics pane inosvika uye pesvedzero yezvawanikwa zvataurwa, mukwikwidzi kuongorora, uye Boolean yekutsvaga modhi.
Mitengo: kubva pamadhora makumi matatu nepfumbamwe kusvika pa $ 39 pamwedzi.
Yemahara kuyedza: chishandiso chinopa mazuva gumi nemana emahara kuyedzwa.
Tweetdeck chishandiso chepamutemo kubva kuTwitter kukubatsira iwe kuitisa zvinobudirira. Iyo dashibhodhi yakarongeka mumisasa kuitira kuti iwe ugone kutevera iyo yekudya, notices, uye kutaurwa kwemaverengeka maakaunzi kamwechete.
Kana iri yekutarisa mhando, unogona kumisikidza rwizi rwe "Seach" rwunounza zvese zvataurwa nezveako kiyi (zita rezita kana peji rako rewebhu) kudashboard rako. Iyo inoshandisa imwecheteyo pfungwa sePamberi Tsvaga paTwitter kuti ugone kusarudza nzvimbo, vanyori, uye nhamba yekubatanidzwa kune ako maratidziro ekutarisa marongero.
Kubatsira kukuru kweTweetdeck ndiko kuvimbika kwayo: sezvo chiri chigadzirwa chepamutemo cheTwitter, unogona kuva nechokwadi chekuti inowana ZVESE zvataurwa zvichikwanisika uye hazvizombove nematambudziko ekubatanidza ne Twitter.
Chinhu chinokanganisa ndechekuti chakanangana nepuratifomu imwe chete. Kana yako brand iine yakasimbiswa Twitter kuvepo uye ichida yemahara mhinduro yekutarisa iyo, Tweetdeck ndiyo yakanaka sarudzo.
Unogona kushamisika kuona SEMrush pane urwu runyorwa - mushure mezvose, zvinonyanya kuzivikanwa seSEO chishandiso. Nekudaro, ine robust brand yekutarisa kugona, chekutanga uye chikuru, ichitarisa kune mawebhusaiti, hongu.
Icho chishandiso chinopa intuitive feed yekutaura uko iwe kwaunogona kushanda neako ega mapositi uye mapeji, tag uye wozvinyora, uye kusefa mhedzisiro yemumwe chaiwo mufananidzo. Pamwe pamwe nemawebhusaiti, SEMrush inoongororawo Twitter ne Instagram.
Sezvo SEMrush iri webhusaiti-yakatarisana, inopa vashandisi kugona kwekutarisa chaiwo maseru. Izvi zvinogona kunyanya kubatsira pakutarisa midhiya inoenderana neindasitiri kana yakatarwa webhusaiti webhusaiti uko mhando yako inokurukurwa zvakanyanya.
Zvakare, SEMrush chishoma chishandiso chinogona kuyera traffic kubva kune online zvitaurwa zvine zvinongedzo - kusangana kwayo neGoogle Analytics inokutendera iwe kuteedzera ese akadhinda kuwebhusaiti yako.
Mitengo: brand yekutarisa inosanganisirwa muGuru Chirongwa icho chinodhura $ 199 pamwedzi.
Yemahara kuyedza: kune 7-mazuva emahara kuyedzwa inowanikwa.
Taura ikambani yeFrance yakazvipira kuongorora nekuteerera hurukuro dzepamhepo. Iyo yakakwana kumakambani epakati nepakati uye Enterprise-chikamu mabhenji sezvo ichipa akawanda akasiyana analytics uye kusangana pamwe nezvimwe zvishandiso zveiyo robust brand yekutarisa.
Inoisa kukosha kwakanyanya pane chaiko-nguva yekutsvaga - zvakasiyana nezvimwe zvishandiso pane ino runyorwa (Awario, Brandwatch) iyo inongopa nhoroondo yezvakaitika (kureva zvinotaurwa izvo zviri zera kupfuura vhiki) seyekuwedzera. Inodhonza data kubva kuFacebook, Instagram, Twitter, maforamu, mablog, mavhidhiyo, nhau, webhu, uye kunyangwe redhiyo neTV kuverengera kuti unogara mukuziva kwese kutaurirana kuri kuitika kutenderera yako brand.
Chishandiso chekutarisa chishandiso chinopa yakadzama analytics dhibhodhi ine ese marudzi emetriki anosanganisira echikadzi, manzwiro analytics, kusvika zvichingodaro. Iyo zvakare ine API yekubatanidzwa iyo inoita kuti iwe ugone kuvaka yavo analytics mune yako wega chishandiso kana webhusaiti.
Mitengo: chishandiso chemahara kusvika chiuru chinotaurwa. Kubva ipapo, mitengo inotanga pamadhora makumi maviri nemashanu pamwedzi.
Yemahara muedzo: Taura inopa yemazuva gumi nemana kuyedzwa kwemahara kune akabhadharwa zvirongwa.
Buzzsumo chishandiso chemukati chekushambadzira saka chimbo chayo chekutarisa kugona chingave chakakosha kune avo mabhureki vari kukoshesa zvirimo.
Icho chishandiso chinokutendera kuti utarise zvese zvirimo kutaura nezve yako mhando uye woongorora kubatikana kutenderedza yega yega yezvinyorwa. Inokupa iwe huwandu hwezvikamu pasocial media, huwandu hweanofarira, maonero uye nekudzvanya. Iyo zvakare inoratidza iwo akazara matanho ekutsvaga kwako.
Nekumisikidza zviyeuchidzo iwe unogona kugara up-to-date nenyaya yega yega nyowani uye blog blog rinotaura nezve yako mhando. Iwe unogona kugadzira zviyeuchidzo zvekutevera marita kutaurwa, kukwikwidza kutaurwa, zvemukati kubva pawebhusaiti, keyword kutaurwa, backlinks, kana munyori.
Mitengo: mitengo inotanga pa $ 99.
Muedzo wakasununguka: pane yemahara yemazuva makumi matatu kuyedzwa.
Talkwalker rine zita munharaunda yemagariro analytics nharaunda - inoonekwa seimwe yeanonyanya kuteerera ekuteerera uye maturusi ekuongorora. Uye nenzira kwayo!
Icho chishandiso-chikamu chemhando yezvikwata zvakakura zvekushambadzira zvine akati wandei analytics dhibhodhi uye AI-yakavakirwa nzwisiso. Talkwalker inounza dhata mune chaiyo-nguva asi zvakare inounganidza uye inoongorora marondedzero echiratidzo ayo anodzokera kumashure kusvika kumakore maviri. Chinhu chimwe chinosiyana neTalkwalker kubva kumakwikwi ayo kutaridzika kwekutarisa: chishandiso chinokwanisa kuwana logo yako pamifananidzo uye mumavhidhiyo paInternet.
Talkwalker inotora data kubva kumagumi enhau enhau anosanganisira akawanda asingazivikanwe akaita seWebo neTV neredhiyo nhau.
Mutengo: $ 9,600 + / gore.
Yemahara kuyedza: hapana yemahara kuyedza, asi kune yemahara demo.
Imwe Enterprise-nhanho brand yekutarisa mhinduro ndeye Meltwater. Iyo yemagariro midhiya uye yekushambadzira analytics chikuva iyo inotsamira zvakanyanya paAI kuti ipe inoitika inoitika.
Inotarisa zvinopfuura zvemagariro enhau, kuongorora mamirioni ezvekutumira zuva rega rega kubva pasocial media mapuratifomu, mablog, uye masosi enhau. Iyo inosefa kuburitsa zvisina basa uye inopa manzwiro kune izvo zvataurwa zvinokufadza iwe
Meltwater inosanganisira akawanda madhibhodhi anotarisa, mabhenji, uye ongorora chiitiko chako chepamhepo. Iwe unogona zvakare kugadzira akagadziridzwa madhibhodhi kusangana nezvinodiwa zvako zvirinani.
Mutengo: $ 4,000 + / gore.
Yemahara muedzo: hapana yemahara kuyedzwa, asi iwe unogona kukumbira yemahara demo.
NetBase Mhinduro iguru yekushambadzira yehungwaru chikuva iyo inosanganisira zvekare kukwikwidza njere, kutambudzika kwematambudziko, kuongorora tekinoroji uye dzimwe mhinduro.
Icho chishandiso chekutarisa chishandiso chakakwenenzverwa - chinokutendera iwe kuteedzera yako mhando pane enhau midhiya, mawebhusaiti, uye echinyakare midhiya chiteshi; tsvaga zvakakosha zvinhu zvinokonzeresa kushambadzira kwechiratidzo kuburikidza nekuongorora kwemanzwiro uye sunga iyi data rese kune rako bhizinesi KPIs.
Pamusoro pe data rakawanikwa kubva pasocial media, rinoshandisa zvimwe zviwanikwa senge ongororo, mapoka ekutarisa, zviyero, uye ongororo, kuti uwane zvakanyanya sezvinobvira pamusoro pechiratidzo chako.
Mitengo: NetBase haipe paruzhinji kupa ruzivo pamutengo wayo, izvo zvakajairika kune Enterprise-chikamu maturusi. Unogona kuwana mutengo wemitengo nekutaurirana neboka rekutengesa.
Muedzo wakasununguka: unogona kukumbira yemahara demo.
Brand yekutarisa inofanirwa kune chero kambani, asi ndeapi maturusi auchazoshandisa zvakazara zvinoenderana newe. Tarisa pabhajeti yako, mapuratifomu aunoda kuvhara, uye zvinangwa zvako.
Iwe unoda kutarisa pane zvakataurwa nezvayo kutarisira zvido zvevatengi uye kuwedzera kuita? Kana kuti pamwe iwe unoda kuongorora yako yakanangwa nevateereri kuti uvandudze yako yekutengesa nzira? Kana iwe unofarira mhinduro kubva kune chaiwo mawebhusaiti kana kuongorora akaunganidzwa?
Iko kune chishandiso pane chero chinodiwa uye bhajeti, uye mazhinji acho anopa mahara vhezheni kana emahara miedzo saka ndinokukurudzira iwe kuti uwane iyo inoenderana nezvinodiwa zvako wozviedza!
Disclaimer: Martech Zone iri kushandisa yavo yekubatana link ye SEMrush pamusoro.
Tags: awariobrand yekutarisamuchiso mukurumbira maturusibuzzsumomeltwatertaurazvitaurematurusi ekuongororanetbasesemrushkutarisana nevanhumunharaunda yekutsvagamutauriTweetdeck